celebrity. new – ဘ၀ ဒသန
အဆီတဝင်းဝင်း နဲ့ မဲနေတဲ့မျက်နှာကို ခဏလေး နဲ့ ချက်ချင်း ပုံစံပြောင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းမျာ
သစ်တံခါးဆရာတော်းထံသွားရောက်ပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခြူးလေ
စနေသားသမီးများအတွက် တစ်နှစ်စာ ကံကြမ္မာဟောကိန်
Category: celebrity. new
သစ်တံခါးဆရာတော်းထံသွားရောက်ပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ခြူးလေး ပရိသတ်ကြီးရေ ခြူးလေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို အပိုအလိုမရှိအောင် အမြဲတမ်းလိုလို သဘာဝကျကျ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခြူးလေးကတော့ ခေတ်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ လူကြီးမိဘတွေအပေါ်သိတတ်လိမ္မာပြီး အလှူအတန်းရက်ရောလွန်း လှတာကြောင့် ပရိသတ်တွေချီးကျူးနေခဲ့ကြရပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ခြူးလေးကတော့ သစ်တံခားဆရာတော် ဘုရားကြီးထံသွားရောက်ပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “ဒီနေ့ ကုသိုလ် ….”ဆိုပြီး Read more
celebrity. newLeaveacomment
မေမေမှမေမေဖြစ်နေတဲ့ တစ်လသားအရွယ် သားလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ စုစုဝေ
မေမေမှမေမေဖြစ်နေတဲ့ တစ်လသားအရွယ် သားလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာတဲ့ စုစုဝေ စုစုဝေကတော့ မြန်မာပြည်ကိုလာရောက်ပြီး အနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဂျာမန်လူမျိုးအဆိုတော် Miki နဲ့ ဖူးစာဆုံခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ စုစုဝေနဲ့ Mikis တို့ဟာ ချစ်သူတွေအဖြစ် အချိန်အတော်ကြာနေခဲ့ပြီးမှာ မကြာခင်အချိန်ကပဲ ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ လက်ထပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Mikis နဲ့ စုစုဝေတို့က ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ (၂၈) ရက်နေ့ကပဲ သူတို့ရဲ့ ပထမဦးဆုံးရင်သွေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် သားလေးကြောင့်ပဲ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စုစုဝေက ဒီကနေ့မှာလည်း တစ်လသားအ ရွယ်လေးရဲ့ သိတတ်မှုကို ပြောပြလာပါတယ် စုစုဝေက “အခုကတည်းက Read more
အသစ်စက်စက် ကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့လေးကို သူကိုယ်တိုင်အကုန်ကျခံပြီး ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ နေဒွေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
အသစ်စက်စက် ကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့လေးကို သူကိုယ်တိုင်အကုန်ကျခံပြီး ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ နေဒွေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် ပရိသတ်တွေတော်တော်များများရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခုမှာခံ​နေရတာကတော့ နေဒွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့သူ့ကောင်မလေးတို့ရဲ့ပြဿနာတွေဟာလူမှုကွန်ရက်မှာ တော်တော်လေးအခြေတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်ခဲ့တာပါ။ အခုမှာတော့ သူတို့ရဲ့ကိစ္စလေးဟာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ကပရိသတ်တွေကြားရေပန်းစားခဲ့တဲ့အတွဲလေးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုမှာတော့ ဝေးခဲ့ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း မနေ့ကနေဒွေးရဲ့ပုံရိပ်တွေ ကြောင့်ပရိသတ်တွေကြားဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါနေဒွေးဟာ ခုမှာဆို နောက် ထပ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရနေတာပါ။ ကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့လေးမှာသူကိုယ်တိုင်ဘေးမှာနေပြီးကိတ်ခွဲခဲ့တာပါ။ အဆိုပါပုံရိပ်တွေကြောင့်ပရိသတ်တွေ ကြားဝေဖန်မှုတွေများစွာခံနေရတဲ့videoလေးကိုလည်းပရိသတ်တွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ခရက်ဒစ် Unicode အသစ်စက်စက် ကောင်မလေးရဲ့မွေးနေ့လေးကို သူကိုယ်တိုင်အကုန်ကျခံပြီး ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ နေဒွေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် ပရိသတ်တွေတော်တော်များများရဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုခုမှာခံ​နေရတာကတော့ နေဒွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့သူ့ကောင်မလေးတို့ရဲ့ပြဿနာတွေဟာလူမှုကွန်ရက်မှာ တော်တော်လေးအခြေတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေလည်းမြင့်တက်ခဲ့တာပါ။ အခုမှာတော့ Read more
မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ လှနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်စိုးပြည့်သဇင်ရဲ့ပုံအောက်မှာ မှတ်ချက်တစ်ခုပြုလိုက်တဲ့ မြနှင်းရည်လွင်
မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ လှနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်စိုးပြည့်သဇင်ရဲ့ပုံအောက်မှာ မှတ်ချက် တစ်ခုပြုလိုက်တဲ့ မြနှင်းရည်လွင် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခုမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်ကမြန်မာဆန်ဆန် မှတ်ချက် လေးနဲ့ လှနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်စိုးပြည့်သဇင်ရဲ့ပုံ အောက်မှာအခုလို မှတ်ချက်တစ်ခုပြုလိုက်ပါတယ်နော်။Tooသရုပ်ဆောင်စိုးပြည့်သ ဇင်ကထိပ်တန်းရွှေဘုရင်၊စိန်ရွှေရတနာအတွက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတင်မယ်နော်ဆိုပြီ းတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားရာ။ သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်ကကျက်သရေရှိရှိလှတဲ့ အလှပါချစ်ညီမလေးရေဆိုပြီးတော့အခုလိုမှတ်ချက်တစ်ခုပြုလိုက်ပါတယ် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ် Unicb မြန်မာဆန်ဆန်လေးနဲ့ လှနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်စိုးပြည့်သဇင်ရဲ့ပုံအောက်မှာ မှတ်ချက် တစ်ခုပြုလိုက်တဲ့ မြနှင်းရည်လွင် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခုမှာဆိုရင်သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်ကမြန်မာဆန်ဆန် မှတ်ချက် လေးနဲ့ လှနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်စိုးပြည့်သဇင်ရဲ့ပုံ အောက်မှာအခုလို မှတ်ချက်တစ်ခုပြုလိုက်ပါတယ်နော်။Tooသရုပ်ဆောင်စိုးပြည့်သ ဇင်ကထိပ်တန်းရွှေဘုရင်၊စိန်ရွှေရတနာအတွက်ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေတင်မယ်နော်ဆိုပြီ းတော့သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာရေးသားဖော်ပြထားရာ။ သရုပ်ဆောင်မြနှင်းရည်လွင်ကကျက်သရေရှိရှိလှတဲ့ အလှပါချစ်ညီမလေးရေဆိုပြီးတော့အခုလိုမှတ်ချက်တစ်ခုပြုလိုက်ပါတယ် စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ခရက်ဒစ်
Astrology, celebrity. new, UncategorizedLeaveacomment
ကျစ်လစ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပေါ်လွင်နေတဲ့ ချောကလျာ ရဲ့ပုံရိပ်လေး မျာ
ကျစ်လစ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပေါ်လွင်နေတဲ့ ချောကလျာ ရဲ့ပုံရိပ်လေး များ ကိုယ်ကျပ်လေးနဲ့ ကျစ်လစ်နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ပေါ်လွင်နေတဲ့ ချောကလျာ ရဲ့ပုံရိပ်လေး များ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာ ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လော ကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိဖေ့ဘွတ်စာ Read more
သူမရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ခံရမှုတွေကြောင့် အမြဲသိမ်ငယ်ရကြောင်း ပရိတ်သက်ကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ
သူမရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ခံရမှုတွေကြောင့် အမြဲသိမ်ငယ်ရကြောင်း ပရိတ်သက်ကို ရင်ဖွင့်လာတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ နိုင်ငံခြားသူလေးတစ်ယောက်လို စွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ အရမ်းလှတဲ့ မင်းသမီးလေးပတ်ထရစ်ရှာက ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းက မော်ဒယ်တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလောကထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး ယနေ့ထက်တိုင်အောင်မြင်မှု ရရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဘိုဆန်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုနဲ့ အပြင်အဆင်တွေကြောင့် လူငယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုခံနေရသူတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ပရိသတ်တွေက အရမ်းလှတယ်လို့ သက်မှတ်ခံထားရတဲ့ ပတ်ထရစ်ရှာဟာ သူမကိုယ်သူမတော့ ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အမြဲသိမ်ငယ်ရတဲ့အကြောင်းကို အခုလိုပဲ ရင်ဖွင့်လာပါ တယ်။ “တစ်ခါမှတော့ဖွင့်မပြောခဲ့ဖူးဘူး။ ရှာရှာဆို မျက်နှာ symmetry Read more
အနေဝေးတဲ့ ချစ်သူဆရာဝန်ချောလေးနဲ့ ဘယ်တော့မှ ပြန်ဆုံရမလဲဆိုတာကို တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ သီချင်းလေးတပုဒ်ကို Share က ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ မေမီကိုကို
အနေဝေးတဲ့ ချစ်သူဆရာဝန်ချောလေးနဲ့ ဘယ်တော့မှ ပြန်ဆုံရမလဲဆိုတာကို တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ သီချင်းလေးတပုဒ်ကို Share က ရင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ မေမီကိုကို မေမီကိုကို ကတော့ MRTV –4ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ တွေကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှု ကိုရရှိထားတဲ့မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းပြီး ရိုးသားပွင့်လင်းလွန်း လှတဲ့ မေမီလေး ကတော့ သူ့ရဲ့အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ပရိသတ်တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ချပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေမီရဲ့ချစ်သူကတော့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ကျော်ဇော်ဟိန်းဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် လက်တွဲလာတာချစ်သူသက်တမ်း (၂)နှစ် ပြည့်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Read more
မိုးအောင်ရင်ရဲ့DJပွဲကို သူမကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပီး အားရပါးရအားေပးခဲ့တဲ့ L ဆိုင်းဇီ
မိုးအောင်ရင်ရဲ့DJပွဲကို သူမကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပီး အားရပါးရအားေပးခဲ့တဲ့ L ဆိုင်းဇီ ပရိသတ်ကြီးရေ နာမည်ကြီး အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်သူ Lဆိုင်းဇီ ကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။ Lဆိုင်းဇီကတော့ အလွမ်း အဆွေးသီချင်းလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ အနုပညာရှင်တစ်ဦးဆိုလည်း မမှားပါ ဘူးနော်။ ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင် အရူးအမူးဖြစ်တတ်သူ L ဆိုင်းဇီက သူမရဲ့ အနုပညာလောကက ဂီတ မောင်နှမတွေအပေါ်မှာ အားပေး ချစ်ခင်မှုအပြည့်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ပရိသတ်တစ်ယောက်လို အားပေး တတ်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။ လက်ရှိမှာ သရုပ်ဆောင် မင်းသားဖြစ် Read more
လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင်
လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး စိုးပြည့်သဇင် ပရိသတ်အချစ်တွေကို ရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေးစိုးပြည့်သဇင် ကတော့ အေးချမ်းပြီး ချစ်စရာကောင်းသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရှင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အလှတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ စိုးပြည့်လေးကတော့သဒ္ဓါတရားလည်းထက်သန်ပြီး စိတ်ထားပြည့်ဝလွန်းသူလေး တစ်ယောက်ပါ ။ အချိန်တွေအကြာကြီး ပရိသတ်အား ပေးမှုရရှိထားတဲ့ စိုးပြည့်သဇင်က အမာခံပရိသတ်မြောက်များစွာကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာအလုပ်တွေ ရပ်နားထားပေမဲ့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးနဲ့ အဆက်အသွယ် မပြတ်စေဖို့ သူ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုလည်း မျှဝေပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အခုလည်း လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေပေးလာတာဘဲ Read more
ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ အနုပညာချွေးနဲစာလေးနဲ့ အနားယူဖို့ သပ်ရပ်ခမ်းနားတဲ့ အိမ်လေးတလုံးဆောက်လုပ်နေတဲ့အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကို ချပြလာတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးမြတ်အောင်
ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ အနုပညာချွေးနဲစာလေးနဲ့ အနားယူဖို့ သပ်ရပ်ခမ်းနားတဲ့ အိမ်လေးတလုံးဆောက်လုပ်နေတဲ့အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကို ချပြလာတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးမြတ်အောင် Myanmar Idolပြိုင်ပွဲကနေ winnerဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တာကတော့ အဆိုတော်ဖြိုးမြတ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်အားပေးမှုအများဆုံးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လူကြီးလူငယ်မရွေးအားပေးခဲ့ကြတာပါ။ သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကလည်းယနေ့တိုင်အားပေးမှုတွေရှိနေတာပါ။ သူ့ဘဝရဲ့တစ်ကိုယ်တော်အခွေလေးကိုလည်းထွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာတွေကိုကြိုးစားနေတာပါ။ သူဟာရိုးသားမှုတွေကြောင့်လည်းခုလိုအောင်မြင်နေရာရလာတာပါ။ အခုမှာလည်းသူရဲ့ကြိုးစားမှုတွေနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်လေးကိုပြလိုက်တာပါ။ အကောင်းဆုံးနားခိုဖို့အတွက်ဆိုပြီး သူအိမ်လေးကိုသေချာတည်ဆောက်ထားတာပါ။ ပရိသတ်တွေလည်းအိမ်ကြီးဘယ်လောက်ခန်းနားလဲဆိုတာ ကတော့အောက်ကပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပေးကြပါဦးနော်။ ခရက်ဒစ် Unicode ရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ အနုပညာချွေးနဲစာလေးနဲ့ အနားယူဖို့ သပ်ရပ်ခမ်းနားတဲ့ အိမ်လေးတလုံးဆောက်လုပ်နေတဲ့အကြောင်း ပရိတ်သတ်ကို ချပြလာတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးမြတ်အောင် Myanmar Idolပြိုင်ပွဲကနေ winnerဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တာကတော့ အဆိုတော်ဖြိုးမြတ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Read more
မွန်ပြည်နယ်မှာ လေဆင်နှာမောင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၀၀ ပျက်စီးမှုနှင့် နောက်၂၄နာရီအတွင်
မြန်မာတွေလက်တစ်ကမ်းက ရှောက်ရွက်ရဲ့ အစွမ်